‘खेमराजलाई जिताउँदा पोखराको प्रतिष्ठा बढ्छ’ | Rastra News
पोखरा, ३० कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले कम्युनिष्ट सरकार संवैधानिक व्यवस्था मास्ने कार्यमा उद्धत रहेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले यो सरकारले संवैधानिक प्रावधानमाथि थिचोमिचो गर्ने, मूल्य र मान्यता तोड्मोड एकदलीय हुकुमी शैलीमा राज्य सचालन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘संविधानको मर्म र भावना एकातिर र सरकार अर्कोतिर छ । एकदलीय कम्युनिष्ट शासन लाद्ने प्रयत्नशील छ । त्यसलाई रोक्न यो चुनाव उपयुक्त बाटो हो।’
‘सरकारको यो रवैया लोकतन्त्रवादी पार्टी मात्र होइन सबै नेपाली जनताको चिन्ताको विषय हो । त्यसैले यो चुनावमार्फत सरकारलाई नैतिक दवाव सृजना गर्न पनि यो चुनाव महत्वपूर्ण हो’ नेता सिटौलाले भने ।
कांग्रेस उम्मेदवार खेमराज पौडेलले चुनाव प्रचार अभियानमा जनता निकै उत्साहित भएको भन्दै कांग्रेसको जीत सुनिश्चित रहेको बताए ।
‘वर्तमान सरकार संविधानमाथि धावा बोल्न, भ्रष्ट, कुशासनले लिप्त, विभिन्न अपराध गर्न उद्धत छ’,उनले भने, ‘राष्ट्रियता, तोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम पनि सरकारबाट भएको छ । यस्ता क्रियाकलाप विरुद्ध कांग्रेसको उम्मेदवारी हो।’
सरकारलाई सही बाटोमा हिंड भन्नका लागि पनि यो चुनाव नेपाली कांग्रेसले नै जित्न आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
जनताको विश्वास, आस्था र भरोषालाई आफूले कहिल्यै पनि मर्न नदिने उम्मेदवार पौडेलले प्रतिवद्धता जनाए । कार्यक्रम पार्टीका इकाइ सभापति बोधराज घिमिरेको सभापतित्वमा भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस, धादिङ–पोखरा सम्पर्क समिति पनि कास्की–२ को उपनिर्वाचनमा खटिने भएको छ ।
समितिको शनिबार बसेको बैठकले चुनाव प्रचार समिति गठन गरेको छ । सभापति लालप्रसाद पाठकको संयोकत्वमा ५१ सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति गठन गरिएको हो ।
जसमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ, केदार धमला, मोहन पण्डित, कमलबहादुर पाण्डे, हरि पन्त, यादुप्रसाद ढकाल, टेकबहादुर थपलिया, माधव लम्साल, नारायण दुवाडी, वेनु पण्डित, सीता श्रेष्ठ, किशोर भट्ट, देवराज अर्याल, भोजराज सापकोटा, शान्ता धरेल, नवीन थपलिया, राजेन्द्र इटनी, राजेन्द्र पाण्डे, कल्पना पौडेल, हरिकृष्ण सिटौला समितिको सदस्य छन् ।
यसैगरी कृष्णप्रसाद थपलिया, केशव श्रेष्ठ, अर्जुन अर्याल, राकेश श्रेष्ठ, सुव्वा श्रेष्ठ, गोपाल तिमिल्सिना, कुमार पन्त, विष्णु आचार्य, लालकाजी श्रेष्ठ, जयराम थपलिया, भरत कडरिया, कृष्णबहादुर शाह, रामकृष्ण खनाल, मिरा पाठक लगायत समितिको सदस्यमा छन् ।
बैठकमा समिति सभापति एवं चुनाव प्रचार समितिका संयोजक लालप्रसाद पाठकले कास्की–२ मा कांग्रेसको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरे । ‘सरकारको अधिकायकवादी चरित्र सच्याउन र लोकतन्त्रका पक्षमा उभ्याउन कांग्रेसले यो चुनाव जित्न जरुरी छ, उनले भने, ‘यो चुनावमार्फत जनमत कांग्रेसकै पक्षमा छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ ।’
कास्की–२ को उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले निकै चासो देखाएका छन् । कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाललाई नै चुनावी कमाण्डर बनाएर खटाएको छ । नेता रिजाल १ सातादेखि कास्की–२ मा खटिएका छन् ।
यसैगरी शनिबार नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महिला नेतृ तथा सांसद डा. डीला संग्रौला पोखरा आएर घरदैलो तथा कोणसभामा सहभागी भए ।
यसैगरी मंसिर ५ गते युवा नेता गगन थापा पोखरा आउने र पोखरा–१५ र १५ को कोणसभामा सहभागी हुने कास्की कांग्रेसले जनाएको छ । सोही दिन साँझ पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र ७ गते बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पोखरा आउने र आमसभामा सहभागी हुने बताइन्छ ।
आमसभाको मिति र स्थान तय नभए पनि मंसिर ७ गते वृहत आमसभा गर्ने कास्की कांग्रेसको तयारी छ ।